‘मेरा श्रीमानले के गर्न सके ?’ भन्दै सलमानका भाइ सोहिललाई श्रीमती सीमाले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न लागेपछि …. – Khabar 27 Media
February 21, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on ‘मेरा श्रीमानले के गर्न सके ?’ भन्दै सलमानका भाइ सोहिललाई श्रीमती सीमाले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न लागेपछि ….
बलिउडमा वंशवादको विषयमा चलिरहेको बहसमा अब सोहेल खानकी श्रीमती सीमा खानको टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ । सीमा खानले सेलिब्रिटी परिवारको हुँदासमेत धेरै मानिसहरुले बलिउडमा केही ठूलो गर्न नसकेको आफूले धेरै उदाहरण देखेको बताएकी छिन् ।
यसका लागि उनले आफ्ना श्रीमान् सोहेल खानको उदाहरण दिइन् । उनले भनिन्, ‘क्षमता बोल्छ । इन्डष्ट्रिमा यस्ता थुप्रै कलाकार छन् जो ठूला परिवारबाट आउँछन् तर खासै केही गर्न सक्दैनन् । यसमा मेरा श्रीमान् पनि संलग्न छन् । वंशवादको यो अर्थ होइन कि तपाईंले केही गरि छाड्नुहुन्छ । अन्त्यमा तपाईं गम्भीर हुन आवश्यक छ र अथक प्रयास र लगनशीलता चाहिन्छ । यो जीवनको हरेक क्षेत्रमा लागू छ । यहि एक मन्त्र हो, म पनि यसलाई मान्छु । म आफ्नो छोरालाई पनि यहि कुरा सिकाउने गर्छु ।’
करण जोहरको शो ‘द फ्याबुलस लाइभ्स अफ बलिउड वाइभ्स’ मा सरिक भएकी सीमा खान व्यवसायिक रुपमा फेसन डिजाइनर हुन् । सीमा खानले भनिन्, ‘यो शोमा हाम्रै जीवनबारे कुरा गरिएको छ । कुनै पनि महिलाको जीवनको एउटा ठूलो हिस्सा उसको परिवार र बच्चा हुन्छ । यस्तो नहुनु जीवनको वास्तविकताको विपरित हो ।’
सीमा र सोहेल खान अलग रहन्छन् । यस्तोमा दुबैको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्न थाल्छन् । के दुबैजना अलग्गिएका हुन् ? यो प्रश्नको जवाफमा सीमा खान भन्छिन्, ‘यो शोमा सबैकुरा वास्तविक नै देखाइएको छ । यसबाहेक मैले सधैं आफ्नो कुरा खुल्ला रुपमा राख्ने गरेकी छु । हाम्रो विवाह सामान्यभन्दा थोरै भिन्न छ ।’ गत वर्ष जूनमा अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको संदिग्ध परिस्थितीमा मृत्यु भएपछि बलिउडमा वंशवादको विषयमा बहस निकै तीब्र छ ।
यति धेरै मुल्य हालेर अभिनेत्री ज्याकलिनले किनिन् प्रियंकाको मुम्बईको घर
March 29, 2021 Shyam Lama
विवाह बन्धनमा बाँधिदै अभिनेत्री कीर्ति सुरेश
February 17, 2021 February 17, 2021 Shyam Lama